ISAAQU WAA BEEL CABASHO BADAN OO HADDANA CU NSURI AH!
Waar niman yahow waa adduunya gadoon iyo adduun dabadii ma haatan bay aniga ila tirsaneysaa! Naayaahee waa islaanta, ma anigoo Reer Shiikh Isxaaq ah baad ila tirsan kartaa? Ma anigoo askari Somaliland ah baad hadalka igu celin kartaa?.
Hadaladaasi waxay ka soo burqanayeen Askari boolis ah oo afka ka xunbeynayey caro awgeed isagoo fadhiyey Oobiga mid ka mid ah isteeshinada lagu xiro laguna gumaado dadka Masaakiinta ah iyo kuwa musaafurka ah. Waxay ahayd goor barqa ah markii ay Hooyo qurbaawi ah oo aan in badan arag wiilkeedii ay soo dul istaagtay askarigan aan arxanka lahayn si ay u weydiiso wiilkeedii ka maqnaa in mudo ah. Waxaysa sarajooga ka dhacday markii la tusay sawirka wiilkeedii laguna wargeliyey inuu dhintay oo laga soo helay Dooxa Hargeisa isagoo meydkiisa uu waraabe dhinac ka cunay. Eheladii wiilka oo aan la wergelin dhimashadiisa iyo sida deg-dega ah ee ay ku aaseen iyo weliba afxumada iyo hanjabaada loo geystay ayaa waxay cadeysay gumaadka aan gabashada lahayn ee Askarta Isaaqu ku hayaan Beesha Muuse Dheriye(Gabooye). Afxumo, Bah dil joogta ah iyo Quudhsi abad lagu hayey Beesha Muuse Dheriye ka sokow ayaa waxaa ilaa sanadkii la soo dhaafay la soo saaray sharci u fasaxaya Askarta Dowlad ku sheega Soomaaliland inay ugaarsadaan oo ay cayaar cayaar (sport) u dilaan dadkan ay qarniyaal soo bakhti wareemeen. Dadkan oo ah la haystayaal oo kale oo markii Beesha Isaaqu dhexdooda iska disho la soo xiro Mid Gabooye ah si loogu aaro, Markii xabsiga wax xaaqa ama nadiifiyo la waayo la soo xiro Mid Gabooye ah si uu u nadiifiyo, sariiraha u goglo, saxaradana uga qaado, Markii la doonayo in tababar ama tijaabo la sameeyana lagu sameeyo Muuse Dheriya ah iyo markii Marqaanku tuso ama Xaraaradu hayso uu ku sanifo Mid Muuse Dheriya ah.
Tacadiyada lagu sameeyo dadkan Muuse Dheriyaha ah waxaa ugu danbeeyey tii ay Askar sarkhaansan kana soo dheregtay isbiiritada quruntay ee Xabashidu ku iibiso badhtamaha Magaalada Hargeisa ayaa waxay goor habeen ah ku soo baxeen dhallinyaro fadhiday Makhaaxi lagu shaaheeyo. Markii indhaha lagu dhuftay Khadar Adan C. Dhabar iyo asxaabtiisa oo ka soo jeeday Baashan laga tiro badan yahay ayaa midabkii Askarta wejigoodu is bedbedelay sidii Jirjiroolaha. Waxaay ka yaabeen waxa Muuse Dheriye saqda dhexe dhex fariisiyey meelaha aan loo ogolayn ee ay sida Boodhadhka wax lagu qoro maskaxda Isla weynta ugu qoran tahay “Midgaan Free Zone”, “Islaweyn Only”, “Aji Only ama “Isaaq Only”.
Dad aad u xanaaqsanaa oo ka murugeysnaa warka dhiilada leh ee ka soo yeedhay Hargeisa ayaa waxaa soo dul istaagay Oday tukubaya, markaasuu weydiiyey waxa jira. Markii loo sheegay ayuu Odaygan Reer Waqooyiga ahi xanaaqay oo uu ku cataabay: “Waxaa la yaab leh sida ay Beesha Isaaqu iloowday wixii Qarniyaashii hore ka soo maray takoorka iyo quudhsiga markii aysan ka soo degi jirin Buuraha, gabdhahoodana aan la guursan jirin”. Waxaa dadkii meesha tubnaa oo dhallin yaro u badan ay mar qudha ku dhawaaqeen Oh! Yaah, Wow! Wow!. La soco qoraalka soo socda ee taariikhdaas ka sheekeynaya
“ Ninba waa markiisee mus ma kula koray”.
Sidii caadada u ahayd ee lagu yaqaanay Beeshan isla weyn ee Hargeisa ayaa waxay jir dil, toogasho iyo xabsi ka buuxin ku bilawday dadyow aad u qiireysnaa oo sida Foolkaanaha u qarxay maadaama aysan intaa in ka badan u adkeysan Karin adoonsi danbe. Waxaa magaalada Hargeisa meel walba ka soo burqaday Kacaan cusub oo Gumeysi diid ah oo Gobanimo u dirir ah oo ka gilgishay Isboortiga(Hunting game) lagu sameynayo iyo maalaayacniga loo dilayo. Boolis ku sheega gashan dharkii Booliskii sharafta lahaa ee Soomaaliyadii hore ayaa isagu ka amar qaata Ina Rayaale meeshii uu hoos tegi lahaa Duqa Magaalada Hargeisa. Booliskan gashan koofiyada Biciidku ku xardhan yahay ayaa ka beensheegay Calaamada madaxooda dul saaran oo ah Biciidka nabada jecel. Waxay geesteen tacadiyo faraban oo noocya kala duwan ah tan iyo intii ay la baxeen magaca ah Somaliland: Xasuuqid shicib aan ahayn Beesha Isaaq, iska dil iyo xasuuqid joogta ah oo lagu sameeyo Beesha Muuse Dheriye oo aan cidina uga daba tegin, Dhoofin, Masaafuris, tarxiil iyo Cadow u geyn shicib aan waxba galabsan, Kufsasho iyo jir dil Birmageytada aan u dhalan Beesha Isaaq. [Eeg halkan]
Waxaa la yaab ku noqotay Wasiirka Arrimaha Gudaha Ismaaciil Faqash iyo Madaxyaweyntiisa sababta ay Gabooyuhu u dhiiradeen ee uga damqadeen Xasuuqa iyo darxumada lagu hayo. Waxaa la yaab ku noqotay inay ka xoroobaan oo ay sheegtaan magaca Gabooye. Ismaaciil Faqash ayaa ku amray Ciidamadiisa cunsuriga ah inay Gabooyaha hooskeenaan beelahii Isaaqa ee ay weligood ku abtirsan jireen kana tirsanaan jireen. Wuxuu Ismaaciil ku hanjabay inuusan marna yeeleyn Beelo ay awoowayaashood lahaan jireen oo ka tirsan Beelaha kala duwan ee Isaaqa una adeegi jirey inay maanta sheegtaan magac iyo mansab ay ku faanaan isagoo ka baqaya inay la simaan. Wuxuu ku wargeliyey in ay Beesha Isaaq ku baraarugto kacdoonkan iyo kacaankan cusub ee Gabooyuhu ka wadaan hoostooda kaasoo ku yeelan doona saameeyn mustaqbalka carruurtooda iyo waxay sii dhalaan. Wuxuu ku tilmaamay dadklii la laayey iyo kuwii la jir dilay Dameero bakhtiyey oo aan laba Cali isweydiineyn!.
Waxaa wax aad looga naxo ah sida uu Ismaaciil Faqash Idaacada BBC-da uga faafiyey sida ay dhamaan u tahay Beeshan uu ka dhashay mid aan is qaban ee ay Shiikh, Shariif, Oday, Ciroole, Caamo iyo Xuquuqul Insaanba ay ugu wada faraxsan yihiin gumaadka Gabooyaha. Waxaa kaloo isagana Dagaal Qaboow ku la jira Beelaha aan Isaaqa ahayn Weriye ku sheega Beeshan u adeega ee ka tirsan Idaacada BBC-da Siciid Cige oo isagu wixii ku saabsan Bahdiisana buunbuuniya wixii uu u arko inay sumacadooda wax u dhimaysana aan dheg jalaq u siin.
Waxaa kaloo wax aad looga naxo ah Barnaamijka SomaliShow Tv. Ee ay daadihiyaan C/Maalik Askar iyo Xaayow(Sakariye) oo markii Bulshada Gabooyaha wax ku dhacaanba ka sheekeeya wax lidi ku ah. Barnaamijkani oo loogu talagalay Bulshada Soomaaliyeed ee Minneapolis in lagu wacyi geliyo ayaa nasiib xumo waxaa loo adeegsadaa waxyaabo ka dhan ah Bulshada La quudhsado. Tusaale ahaan markii shir lagu qabto Magaalada ayaa waxay si xun u sheegaan oo faafiyaan dacaayad iyo iyagoo hadaladii meesha laga soo jeediyey u sheega si aan ahayn sidii loo yidhi. Waxay inta badan C/Maalik iyo Xaayow ku soo celceliyaan been abuurkii ay ka sheegeen Boqor Xaaji Muuse iyo shirkii 3 sano ka hor ka dhacay Magaaladan iyagoo aad uga xanaaqsan oraahdii ahayd “I’m Midgaan So What”. C/Maalik isagoon soo wareysan ninkii funaanadaa xirnaa ayuu ku masabitay ereyo uusan odhan, wuxuuna ilaa iyo maanta kusoo celceliyaa ereyadaas iyo Oraahyadii Boqor Xaaji Muuse inkastoo ay ka soo wareegtay in kabadan 3 sanno. C/Maalik oo ay cunsuriyadu tahay hoygiisa aadna u taageersan Soomaaliland ayaa wuxuu maanta bilaabay dacaayad hor leh oo uu ku minja xaabinayo gefefka loo geysanayo dadka Muuse dheriyaha ah. [Eeg halkan]
Waxaa la wada ogyahay maanta in Beesha Muuse Dheriye meel ay joogaanba ay ku rafaadsan yihiin oo ay soo dilootay quudhsi, cunsuriyad iyo iska dil aan loo aaba yeelin. Waxaa kaloo la ogyahay dhamaan Beelaha laga tira badan yahay ee ay Soomaalida kale u bixisay DHICIS (NUS) in ay yihiin Beelaha ugu Muwaadinsan Soomaaliya ee aan marna is hubeyn, hubna u raadsan Dawlado Shisheeye. Waxaa waajib noqotay in Maanta ay Beelahani is difaacaan oo ay Dagaalamaan maadaama Soomaalinimo, Islaanimo iyo Insaaninimo intaba aan lagu tixgelineyn. Waa xaq in qofku is difaaco maadaama lagu xadgudbay sharaftiisa, maalkiisa iyo naftiisa. Waa xaq inuu qofku isdifaaco maadaama loo turi waayey. Waxaan kula talinaynaa dhamaan dadka laga tiro badan yahay inay iskaashadaan bilaabaana sidii ay isaga difaaci lahaayeen cadowga gudaha ah ee ay leeyihiin!
Waa xaq inaad aadaan meeshii aad ka heli kartaan caawimo, saanad iyo dhaqaalaba maadaama ay sameeyaan kuwa Isweyneysiinaya ee idinku adoonsanaya maal iyo awood aysan lahay ee ay ka soo amaahdeen Xabashida. Waxaan kula talinaynaa Odayaasha Muuse Dheriye(Gabooye) inaysan marnaba u dhega nuqlaan Ismaaciil Faqash iyo Culumadiisa kana digtoonaadaan inay noqdaan maqaarsaar.
Ballanteenu waa Halgan, Harjad iyo Hubkoo la qaato!
Xusid: Waxaa nagu maqaala ah in ay Jabhada SNM ee ka talisa Waqooyiga Soomaaliya ayaa buunbuunisa Magaca Gabooye si ay ugu adeegato. Magaca dadkani waa Muuse Dheriye!
Nin u Dhashay Beesha Gabooyaha ayaa Hargeysa Lagu Diley, Dadkii Arintaas Ka Mudaharaadayna Xabsi ayaa la dhigay, waxaana arintaas ka waraysanay Garaad Axmed Diiriye Geylan... Guji...